Iyo Ibex 35 ingangoita pamapoinzi mazana mapfumbamwe nemazana matanhatu, zvino chii? | Ehupfumi Zvemari
Zvairatidzika sezvisingafungidzike mwedzi mishoma yapfuura uye kunyanya pakupera kwa 2019. Asi chokwadi ndechekuti indekisi inosarudza yeSpanish equities, iyo Ibex 35, yatove pamatanho e9600. Neimwe nzira zvinoita sekudaro yakafukidza zvinangwa zvayo zvirinani munguva pfupi. Asi chokwadi ndechekuti mamiriro aya ari kukonzera kusahadzika kwakawanda pakati pevashambadzi vadiki nepakati. Kunyanya sezvo ivo vasingazive zvekuita kubva ikozvino zvichienda mberi. Kunyangwe kugadzirisa zvigaro zvavo mumusika wemasheya kana kana, nekusiyana, zviri nyore kuve mumisika.
Chero zvazvingaitika, uye mumutsara wakakwana pamwe neese eEuropean stock exchange, chikamu chekutenga paIbex 35 chakatungamira kuti chiiswe pamatanho ataurwa pamusoro. Ehezve, sezvo mari yacho isingamire, iine ziso pa Musangano weFed uye chii chingaitika neBrexit inotyisa. Ipo kune rumwe rutivi, mutengo wemafuta wakadzikama mushure mekukwira kwawo kwazvino. Joketi yakazara mairi ichave yakaoma chaizvo kuita sarudzo yekudzivirira mari inowanikwa nevashambadzi vekutengesa.
Iko iko kwakakosha chokwadi kune misika yequity kutenderera pasirese haigone kukanganikwa futi. Iko kudzikama kweiyo kutengeserana pakati peUS neChina yakazogadzira kubatanidzwa kwemisika yemari. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu navo. Kune chikamu chikuru, svondo rinouya misika yacho ichatipa imwe kirasi yakakosha yekuti musika wemasheya uchachinja sei kubva muna Kubvumbi unotevera. Nguva yakagara iine bearish mumakore achangopfuura.
1 Ibex 35: zvinangwa zvakavharwa?
2 Kufamba mudiki kumusoro
3 Mapazi akanakisa kupinda
4 Inogona here kupfuura zviuru gumi?
5 Magetsi magetsi mukusununguka kwemahara
6 Chimbadzo chakamirira
Ibex 35: zvinangwa zvakavharwa?
Uyu ndiwo mubvunzo wakanaka wakabvunzwa nezviuru nezviuru zvevashambadzi vadiki nepakati munyika medu. Zviri munzira a kurwara kwehuremu mushure mekudzokororwa kwemisika yemari mukati mekota yekutanga yegore. Iko kukwira kwepedyo ne10% kwakacherechedzwa, chimwe chinhu chisina kunyatso tariswa nevanoongorora zvemari pakutanga kwegore, mushure mekusarudzwa kwehuwandu hwenyika dzakadonhedzwa kusvika panosvika 13% gore rapfuura. Asi zvese zvinoita sekuratidza kuti epasi rese misika yemasheya yapindura chaizvo kudambudziko iri
Kune rimwe divi, izvo zvinowedzera kubva muna Ndira zvave zvakamira chaizvo uye hazvingashamise kana paine zvimwe kugadzirisa kwakanaka mumitengo yemigove yezvivimbiso zvakanyorwa. Takatarisana nemesester yechipiri yakanyanya kuomarara kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Kunyanya, nekuti zvinogona kusangana nekuwedzera kuri kuderera kwehupfumi hweEuropean. Kunyanya, zvine chekuita neCommunity locomotive, Germany, iyo mumwedzi yapfuura iri kuratidza inopfuura chiratidzo chimwe chekushaya simba kwehupfumi.
Kufamba mudiki kumusoro
Chero zvazvingaitika, pane chinhu chimwe chete chinobvumirwa nechikamu chikuru chevatariri vemusika wemari. Uye chokwadi ndechekuti nzira iyo iyo inosarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35, inogona kunge iine, yatove shoma kwazvo. Iyo yakavezwa, pane zvakanakisa, pa nhanho padhuze kusvika zviuru gumi zvinongedzo, iyo mukana wayo wekudzokorora waisazokwidziridzwa zvakanyanya kubva pazvinzvimbo zvazvino. Nekuti mukuita, ingadai yatove "yakadya" chikamu chakanaka chekuwedzera muchikamu chekutanga chegore. Kunyangwe iyo bhangi chikamu chakasaririra kumashure kumashure kupfuura vamwe kuti vabudirire zvinangwa zvazviri chaizvo.
Kubva pane ino yakajairika mamiriro, hapana mubvunzo kuti pane zvishoma zvishoma zvaungakwanise kuburikidza nemisika yemari. Iko mune mukana wese pane zvakawanda iwe zvaunogona kurasikirwa kupfuura kukunda izvozvi. Kunze kwekunge yagadzira chakakosha kururamisa mutengo izvo zvinokutendera iwe kuti utenge masheya pamutengo unokwikwidza zvakanyanya kupfuura panguva ino. Kunyanya pamberi pe panorama yatinayo kumberi uye iyo isiri chero chinhu chakanaka maererano nekushanduka kwemabhegi munharaunda yenharaunda. Iko, Italy pachayo yakapinda mumamiriro ekushomeka kwehunyanzvi.
Mapazi akanakisa kupinda
Chero zvazvingaitika, kune akati wandei ematokisi ezvikamu anogona kuita zvirinani pane vamwe kubva panguva dzino chaidzo. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti ivo vakanyanya kurangwa mumwedzi mitatu yekutanga yegore rino. Zvikurukuru, mumwe wavo ndiro bhangi rine hunhu hwave kunyanyisa kusanzwisisika. Nekukosha kwekuderera mukushandurwa kwemitengo yaro uye mumwe wemienzaniso yakakodzera wakamiririrwa ne Banco Sabadell iyo parizvino iri kutengesa pazasi peyuniti yuniti. Uye kunyangwe ichiita senge mutengo wakanaka kuvhura zvinzvimbo, iri mune yakashata mamiriro.
Nekudaro, hazviite kuti tsika dzebhengi dzirambe dzichidonha nechisimba sezvo zvaizounza dambudziko rakakomba rehurongwa. Mupfungwa iyi inogona kunge iri kushamisika kukuru kwekota inotevera yegore, iine kudzoreredzwa padiki pane basa rayo mumisika yemari. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Iko pazvinenge zvichidikanwa kuve yekutarisisa kwazvo kune kwayo shanduko munzvimbo dzenyika uye dzekunze.
Inogona here kupfuura zviuru gumi?
Uyu ndeimwe yemibvunzo irikuzvibvunza ivo vashoma vadiki nepakati varimi, sezvo zvingangoita kwauri. Iyo yakaoma kwazvo kuti inogona kusvika pamatanho aya mukotesheni mune yezvehupfumi mamiriro senge iripo ikozvino. Asi pane zvinopesana, zvese zvaizoratidza kuti iyo yekuderera inofanirwa kuiswa mumisika yemari. Kunyanya chaizvo mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35, inoita kunge yakafukidza zvinangwa zvayo. Nechengetedzo dzakadzoserwa neanopfuura gumi% Parizvino gore rino.
Nepo kune rimwe divi, hazvigone kutongwa kunze kuti mumwedzi iri kuuya panogona kuve nesimba rekutengesa rakamanikidzwa rakaiswa pachena kune muenzanisi. Kunyanya kana iyo data rehupfumi richienderera kuva risina kunaka munzvimbo yeuro euro. Izvo hazvigone kana kutongwa kunze kuti iyo inosarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35, ichawira zvakare pasi pemakumi mapfumbamwe emapoinzi. Muchiitiko ichocho, paizove nechakakosha shandura yako yepasi maitiro izvo zvaizoenda kubva mukukwiridzira kuenda kuchikwata munzvimbo pfupi pfupi yenguva Sevamwe vanotungamira equity musika vaongorori vanga vachinyevera kubva kutanga kwegore.
Magetsi magetsi mukusununguka kwemahara
Hatisi kuzoroora kuti tirangarire kuti aya mitengo yemasheya yakakwira mumitengo yavo uye ari mumamiriro ezvinhu akanakisa kana ivo vachitengesa mukukwira mahara Ndiyo yakanakisa yeiyo manhamba anogona sezvo vasina kukakavara pamberi uye vanogona kukwira zvinzvimbo zvepamusoro kubva ikozvino. Mamiriro ezvinhu ari kukanganisa ayo ese ehunhu uye pasina kana chakasarudzika, semagirafu anotinyevera izvozvi. Asi kune rimwe divi, ivo havazoregererwe kubva kugadziridzwa kubva ikozvino zvichienda uye kumwe kusahadzika pamusoro pezvichaitika kubva zvino zvichienda mberi. Kwete pasina, iwo zvikumbiro pamusika wemasheya izvo zvakakosheswa mune dzimwe nguva pamusoro pe40% mumwedzi mishoma kwazvo.
Zvakare, hazvigone kukanganwika kuti ichi chikamu chinoshanda senzvimbo yekutizira pamberi pezviitiko zvisina kugadzikana mumisika yemari. Asi pane zvakawanda zvakasimuka mumwedzi ichangopfuura zvekuti chokwadi chinotyisa pamusoro pezvingaitika muzvikamu zvinotevera zvekutengesa. Kunyangwe vaine govanisa goho inokwezva chaizvo, iri padhuze ne7% uye imwe yepamusoro-soro mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35. Kuburikidza nemubhadharo wakatarwa uye wakavimbiswa gore rega rega, uyo unowanzo kugoverwa mwedzi mitanhatu yega yega.
Chero zvazvingaitika, hazvifanirwe kukanganikwa kuti maziso evashambadzi akamirira pane sarudzo dzavanoita kubva pakutanga. European Central Bank (ECB) kuona mutemo wayo wezvemari. Iko kunoratidzwa kwese kunongedzera kune izvo zvichave mune rinotevera gore uko kwakamirirwa kwenguva refu kwakakwira mumitero yemitero ichaitika. Icho chingave chirevo chekutanga kumisika yemakambani kutanga kudonha mukugadziriswa kwemitengo yavo.
Ichi chinhu chinotyisa vatyairi vese vadiki nepakati. Iko kunosarudzwa index yeSpanish equities inogona kunge iri iyo inonyanya kukuvadzwa yenyaya iyi isinganyanyodiwa mumisika yemari. Iko kutengesa kwaizodzoka zvakare nesimba risingawanzo pasi. Sevamwe vanotungamira equity musika vaongorori vanga vachinyevera kubva kutanga kwegore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Iyo Ibex 35 ingangoita pamapoinzi mazana mapfumbamwe nemazana matanhatu, zvino chii?